Nidaamka ay hubka ku iibgayso Britain oo la dalbaday in wax laga badelo – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaNidaamka ay hubka ku iibgayso Britain oo la dalbaday in wax laga badelo
Hiiraan Xog, Oct 03, 2017:- Dowladda Britain ayaa waxaa loogu baaqay inay ogolaansho rasmi ah u siiso Wasaaradda Horumarka Caalamiga ah inay go’aan ku yeelato halka Britain ay hubkeeda dibbada uga iibinayso.
Hay’adda samafalka caalamiga ah ee Save the Children, ayaa sheegtay in taasi ay soo afjari karto qaabka iskhilaafsan ee ay Britain gargaarka ugu dirto goobaha ay colaadaha ka taagan yihiin halkaas oo hub Britain lagu sameeyay lagu adeegsado colaadda sida Yemen oo kale.
Xiisad ayaa ka taagan siyaasadda Britain ee ku aaddan dalka Yemen.
Dowladda Britain ayaa in ka badan 3 bilyan oo giniga istarliinka ah hub uga iibisay Sucuudi Carabiya tan iyo markii ay colaaddu ka bilaabatay dalka Yemen.
Britain ayaa taageerta dadaallada isbahaysiga uu horkacayo Sucuudiga ay ku burburniyaan fallaagada Xuutiyiinta dibna loogu soo celiyo dowladdii sharciga aheyd ee dalkaasi.
Dhibaatada ayaa ah in inta ay colaaddu socotay halkaas lagu dilay kumannaan qof oo rayid ah.
Taasna waxa sababtay in Britain gargaar ugu deeqday Yemen si wax looga qabto dhibaatada bini’aadamnimo ee dagaalkaasi ka dhalatay.
Warbixin maanta la daabacayo ayey hay’adda samafalka ee Save the Children ku sheegaysaa in tani ay tahay wax isburinaayo oo aan caddeyn.
Guddiga ansixiya iibinta hubka ayaa waxaa ka mid ah saraakiil ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda, midda Ganacsiga iyo tan Gaashaandhigga.
Save the Children ayaa sheegaysa in Wasaaradda Horumarinta Caalamiga ah ay qasab tahay inay kursi ku yeelato miiska si loo sameeyo tixgelin dhanka bini’aadamka ah makra ay timaado hubka mustaqbalka la iibinayo.
Shirkada Nissan oo $220 milyan oo khasaare ah ay ka soo gaari doonto dalka Japan